Wasiirada dowlad wadaajinta iyo beeraha oo su’aalo la weydiiyay – The Voice of Northeastern Kenya
Wasiirada dowlad wadaajinta iyo beeraha oo su’aalo la weydiiyay
Star FM March 15, 2019
Wasiirka wasaaradda beeraha Mr. Mwangi Kiunjuri iyo dhigiisa dowlad wadaajinta Mr. Eugene Wamalwa ayaa shalay su’aalo lagu weydiiyay xarunta dhexe ee waaxda dambi baarista dalka.
Waxaa laga wareysanayay mashruucda lagu dhisayo biyo xireenada Kimwarer iyo Arror ee ismaamulka Elgeyo Marakwet kaasi oo la sheegay inay fadeexad musuqmaasuq hareysay welina siyaasiyiinta dalka ay si weyn u hadal hayaan.
Waaxda dambi baarista ee dalka ayaa weli ku howlan inay ogaato qaabka ay dowladu ku bixisay 21 bilyan oo shilin oo la siiyay shirkad laga leeyahay Talyaaniga laguna magacaabo CMC Di Ravena in kastoo aanan biyo xireenadaasi la billaabin.
Sido kale waxay maalmo ka hor hadal hayn siyaasadeed ka dhalatay in ku xigeenka madaxweynaha dalka William Ruto uu sheegay in dowladda ay bixisay oo keliya 7 bilyan oo ay waxba kama jiraan tahay lacagta la soo tabiyay.
Hasa ahaate labada wasiir ee su’aalaha la weydiiyay ayaa sheegay inaynan fadeexadaasi ku lug lahayn.
Wasiirka beeraha Mr .Kiunjuri, ayaa dhankiisa sheegay inay jiraan dad doonaya inay sumcadiisa dhaawacaan.
Waxaa uu hoosta ka xariiqay inuunan eedeysane ahayn oo loogu yeeray oo keliya si uu gacan uga geysto baaritaanada socdo.
Mr. Eugene Wamalwa, wasiirka dowlad wadaajinta ayaa dhankiisa su’aal geliyay sababta fulinta mashruucaasi loogu wareejiyay wasaarado kala duwan oo ay ka mid yihiin midda biyaha , waraabka iyo sido kale dowlad wadaajinta.
Dhanka kale agaasimaha waaxda dacwad soo oogidda dalka Mr. Nuurdiin Xaaji ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedeymo loo jeediyay waaxda DCI-da , xafiiskiisa iyo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ee EACC.
Qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka gaar ahaan kuwa taabacsan ku xigeenka madaxweynaha dalka ayaa maalmihii la soo dhaafay ku andacoonayay in agaasimaha waaxda dambi baarista la adeegsanayo si uu u bartilmaameedsado mas’uuliyiin iyo qowmiyad gaar ah.
Waxay ku doodayaan in laamaha dambi baarista dalka aynan daacad ka ahayn la dagaalanka musuqmaasuqa iyo in lala xisaabtamo cid kasta oo lala xariiriyo falalka lagu lunsado kheyraadka dadweynaha loogu adeego.
Sido kale hadal haynta siyaasadeed waxaa ka mid ah inuu jiro dadaal ku aaddan in William Ruto laga hor istaago hamigiisa siyaasadeed ee ku aaddan la wareegidda hoggaanka dalka sannadka 2022-ka.
Hasa ahaate agaasimaha waaxda dacwad soo oogidda dalka Mr. Nuurdiin Xaaji ayaa sheegay inaynan jirin cid ama qowmiyad si gaar ah loo bartilmaameedsanayo.
Xilli uu wareysi gaar ah siinayay mid ka mid ah taleefishinada maxaliga ee sida gaarka ah loo leeyahay ayuu soo bandhigay dokumeenti ay ku qoranyihiin magacyada , tirada iyo qabaailka ay ka soo jeedaan dadka lagu eedeyay musuqmaasuqa waxaan ka mid ah 16 qof oo soomaali ah
Waxaa uu sheegay in laamaha dambi baarista ay yihiin kuwo madax bannaan oo aanan cidna ka amar qaadan xooggana saara caddeeymaha loo soo bandhigo si tallaabo sharciga waafaqsan looga qaado dambiilayaasha.
Shacabka iyo siyaasiyiinta dalka ayuu ka codsaday inaynan siyaasad ama qabyaalad u adeegsan la dagaalanka musuqmaasuqa.
← Maraykanka oo sheegay in Kenya ay weli ka jiraan xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqul aadanaha
40 qof oo ku dhimatay weeraro lagu qaaday masaajido ku yaalla New Zealand →